बालबालिका धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर नेपालबाट १८ देशमा तस्करी ! – Pradesh Online Khabar
बालबालिका धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर नेपालबाट १८ देशमा तस्करी !
August 13, 2019 अपराध / समाचार
काठमाडौं । नौ वर्षयता ६ मुलुकमा २० बालबालिका धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर लगिएको सरकारी अभिलेख छ। ती मुलुकका तथ्यांक जोड्दा त्यही अवधिमा १ सय ५९ नेपाली बालबालिका त्यहाँ धर्मसन्तानका रूपमा लगिएका छन्। बढी भएका १ सय ३७ जना कसरी गए ? यसले धर्म सन्तानका नाममा नेपालबाट बालबालिका तस्करी भइरहेको पुष्टि हुन्छ।
पूर्वयुवराज पारस शाहले मागे माफी
रवि प्रकरण : म्याद आज सकियो, अब के हुन्छ? हेर्नुहोस यस्तो छ अबको कानुनी प्रक्रिया
मकै जोगाउन रातभर जाग्राम : दिनभर बाँदर राती बँदेलबाट स्थानीय हैरान
संसारको सबै भन्दा महँगो गाई !!
भेरीको बाढीले बनाइयो बिचल्ली र जङ्गलमा बास ।।